Pixelz: Ọrụ Ntughari Foto maka E-Azụmaahịa | Martech Zone
Ọ bụrụ na ịzụlite ma ọ bụ jikwaa saịtị ecommerce, otu akụkụ dị oke egwu mana na-ewe oge bụ ikike gị ịdebe foto ngwaahịa ụbọchị niile toro saịtị ahụ. Mmadu ato nke ndi Denmark bu ndi ike gwuchara na ha abanye n'otu nsogbu nsogbu na imeputa ulo Pixelz, usoro ikpo okwu nke ga dezie, dozie, ma bulie gị ihe onyonyo maka gị, na-ahapụ ihe okike gị iji mepụta.
E-azụmahịa e wuru na onyonyo — a na-apịa ọtụtụ ijeri onyonyo ngwaahịa kwa ụbọchị, ma jiri ya tụnyere ndị ahịa kwa ụbọchị. Iji merie ndị ahịa ahụ, ụdị na ndị na-ere ahịa ga-ewepụta foto dị elu karịa, ọsọ ọsọ, na nnukwu olu karịa na mbụ. Nke ahụ bụ ebe ọrụ ọrụ nkwụghachi ụgwọ Pixelz na-abata: usoro ntanetị ọkachamara anyị nyere aka na-arụ ọrụ (SAW ™) na-eme ka edezi foto n'ime Software-as-a-Service.
I nwere ikike hazie mmejuanya a na-atụ anya nke foto gị iji hụ na ewuru ha maka mkpa azụmahịa e-commerce gị.
Pixelz emepewokwa ụfọdụ ihe ọmụma na-acha akwụkwọ akụkọ na omume kacha mma maka ngwaahịa ngwaahịa ecommerce. Ha n'elu ikpo okwu na-enye onyinye ọnụahịa anọ dị iche iche:
RockSmith - na-enye ndị na-ese foto nwere ike iwepu nzụlite, akuku, kwado, tinye onyunyo ma dozie onyonyo ngwaahịa. Ihe ngwugwu a na - enweta onyonyo nnwale n'efu 3 24 na ntụgharị oge elekere XNUMX (Mon-Sat).
Pro ere ahịa - na-enye ndị ọkachamara e-commerce nwere ihe niile dị na Solo na ọnụahịa dị ala, agba-agba yana ntụgharị ụtụtụ echi (Mon-Sat), na nhọrọ 3 awa ngwa ngwa.
Studiolọ ọrụ Studio - na-enye ihe niile dị na Solo na mgbakwunye na mmezigharị omenala, mmekorita agba, ịkọgharị, arụmọrụ, na ịbịaru maka ụlọ ọrụ foto ndị ọkachamara. Gụnyere nkwekọrịta ọrụ ọkwa, ọkachamara na ụgbọ mmiri, njikwa akaụntụ raara onwe ya nye na ọtụtụ ndị ọrụ.
API - Gwakọta akụrụngwa na-arụ ọrụ na ngwa ndị ọzọ gị maka ndị na-ere ahịa, ahịa, na ngwa mkpanaka na RESTful ma ọ bụ SOAP API.
Tags: oyiyi aka-eluoyiyifoto aka-elupixelzpost mmepụtangwaahịa oyiyingwaahịa foto